ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: July 2011
အရင်အပိုင်း(၁)မှာတုန်းက မရှင်းမလင်းရေးထားမိခဲ့တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ဂျပန်မှာကျောင်းတက်တဲ့အခါ ၁၂ တန်းလို့အလွယ်တစ်ကူရေးလိုက်မိတာပါ။ စိတ်ထဲမှာ ဂျပန်မှာကျောင်းတတ်မည်ဆိုတာကို ဂျပန်သွားချင်တဲ့သူလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားမယ်။ ဂျပန်လာမယ့်သူကလည်း ဒါတွေသိထားပါတယ်ဆိုပြီး အလွယ်တစ်ကူရေးလိုက်တာပါ။ နောက်တစ်ခုက တော့ ကျောင်းစရိတ်ကိုရေးမိတာပါ။
ဂျပန်မှာကငွေကို သောင်းအထက်ဖြစ်သွားရင် တစ်သိန်းဆိုတာထက် ၁၀သောင်းတို့ သောင်း၁၀၀ စသည်ဖြင့် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့တစ်သန်းလို့ မသုံးပဲ ၁၀ သိန်းလို့ သုံးသလိုမျိုးပေါ့လေ။
အတန်း ၁၂ တန်းဆိုတာကတော့ ဂျပန်မှာ မူလတန်းက ၆ နှစ်၊ အလယ်တန်းက ၃ နှစ် နဲ့ အထက်တန်း ၃ နှစ်၊ စုစုပေါင်း စာသင်နှစ် ၁၂ တန်းပြီးမှ တက္ကသိုလ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်က ၁၀ တန်းအောင်နဲ့ဆိုရင်တော့ ၂ တန်းလိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည့်က ၁၀ တန်းအောင်တွေက ဒီမှာ ဂျပန်စာ ၂ နှစ် ပြန်တက်ရတာပါ။ တစ်ချို့တော့ ဂျပန်စာတစ်နှစ်နဲ့တင် တက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်ဖြေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
ကျွန်မတို့ခေတ် undergrad တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ ၁၂ တန်းရှိရမယ်ဆိုပြီး ခေါ်တာပါ။ ဒီတော့အများစုက ဒုတိယနှစ်တွေပါလာကြတာပါ။ အဲ့ခေတ်တုန်းကအသက်ကို ၁၉ နှစ်ပြည့်ပြီး ၂၂ နှစ်ထက်မကျော်ရဆိုပြီးခေါ်ကြတာပါ။
ဘွဲ့လွန် စကောလာ (Master, Ph.D.) အတွက် ဘာတွေလိုမလည်း။
မာစတာ စပြီးလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည့်ဘက်က
အစိုးရ၀န်ထမ်းအများစုလျှောက်လို့ရကြတာကတော့ ယခင်မွန်ဘူးေ၇ှာ(Monbusho) ယခု
မွန်ဘူးခကခုေ၇ှာ(Monbukagakusho)လို့ခေါ်ကြတဲ့ ဂျပန်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Fully scholar ပါပဲ။ အပြင်က သူတွေလျှောက်တာအတော်ကိုနည်းပါတယ်။ အပြင်ကနေလည်း(အစိုးရ
၀န်ထမ်းမဟုတ်သူတွေလည်း)လျှောက်လို့ရပါတယ်။ သူရဲ့အားသာချက်က မာစတာ၂ နှစ်ပြီးလို့ ကိုယ့်ပေ၇ာ်ဖက်ဆာက ထောက်ခံတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် Ph.D. ကိုဆက်တက်လို့ ရတာ က အားသာချက်ပါပဲ။ အများစုက ဆက်ပြီးရကြပါတယ်။ ဘယ်လို ဆိုရင် မာစတာကနေ Ph.D. ဆက်လျှောက်လို့ရသလည်းဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ သီးစစ်က အနည်းဆုံး A grade သို့မဟုတ် A+ တော့ရဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ချို့သော မေဂျာတွေမှာတော့ ဆရာနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် B လောက်ဆိုရင်ကို လက်ခံပေးတာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းအများစုကတော့ မာစတာပြီးတာနဲ့ Ph.D. ကို ဆက်ပြီးလျှောက်ကြတာ များပါတယ် (တွေ့ရသလောက်ပြောတာပါ)။ အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူလည်း အလုပ်မလုပ်သေးဖူးဆိုရင် ဆက်တက်ပေါ့ ။ မာစတာကနေ ဆက်ပြီးတက်မယ့်သူကြတော့ Ph.D. ကို ၃ နှစ်အတွင်းပြီးအောင် လုပ်ရပါတယ်။ မွန်ဘူးရှော စကောလာက အများဆုံး ၅ နှစ်ပဲပေးတဲ့အတွက် ၂ နှစ်ကို မာစတာမှာသုံးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။ ၃ နှစ်နဲ့ မပြီးသွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ လွယ်ကူစွာမတွေးမှိအောင် ရေးရတာပါ။
တစ်ချို့ကတော့ လာကတည်းက Ph.D. အတွက်ဆိုပေမယ့် ၁ နှစ်ကိုတော့ research student အနေနဲ့ တက်ရပါတယ်။ စကတည်းက Ph.D. အတွကလက်ခံပေးထားပြီးလို့ လာတယ်ဆိုပေမယ့် စာမေးပွဲတော့ဖြေရပါသေးတယ်။ သူတို့လိုမျိုးကြတော့ ၁ နှစ် research နဲ့ နောက်၎ နှစ်ကို Ph.D. အတွက်
ဒီပို့စ်မှာအဓိက ရေးမှာကတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူများအတွက် မာစတာအတွက် စကောလာလျှောက်မယ်ဆိုရင်ပါ။
အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ ၁။ Monbusho
၂။ ADB Asian Development Bank
၃။ World Bank
လတ်တစ်လောမှာ World Bank ကနေ မြန်မာ တွေလည်းစကောလာရတာတွေ့ပါတယ်။ နှစ်ရှည်တော့မဟုတ်ပဲ ၆ လ တို့ဘာတို့တော့မြင်ဖူုးပါတယ်။
World Bank ကနေ လက်ရှိ ၂ နှစ် စကောလာနဲ့ လာထားတဲ့သူငယ်ချင်းနိုင်ငံခြားသားတွေကတော့အတော်ကို level မြင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်သင်ယူမယ့်မေဂျာအခြေခံ မရှိခဲ့ကြဘူးသူတွေ ပါလာကြပေမယ့် သူတို့တွေက သင်ယူမယ့်မေဂျာကို တစ်ချို့ မာစာတာ ပြီးထားပြီးသားတွေပါပါတယ်။ ဒါကသိထားရအောင်ပြောတာပါ။ ခက်လွန်းတယ် မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါ။
မြန်မာ တွေအတွက် အခွင့်အရေးများများရနိုင်တာဆိုရင် ADB နဲ့ မွန်ဘူးရှော စကောလာပါ။
ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်း ADB အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ADB ရဲ့ စကောလာကိုလျှောက်လို့ရတာပါ။ ADB ရဲ့သဘောတစ်ရားဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတဲ့ သဘောတရားများရှိလေသလားပါ။ (ဆရာရဲ့ တရားဝင် မဟုတ်တဲ့ပြောစကားပါ)။
လက်တလောမှာလည်း ADB နဲ့ လာကြတဲ့ ကျောင်းသား၊သူမှာ ကျောင်းသူက ပိုများသလားလို့လေ။
MBA, MPA, Public Policy, IR, Eco. မေဂျာတွေများပါတယ်။ လက်လှမ်းမှီသလောက် ရေးချတာပါ။တခြားမေဂျာတွေလည်းရှိပါတယ်။
၂၀၁၂ စာသင်နှစ်အတွက် ရန်ကုန်က ကျွန်မနဲ့အလုပ်တူလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် ဒီနှစ်အောင်ပါတယ်။ ၉ လပိုင်းဆို လာမှာပါ။
ကျွန်မ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ဂိုက်လိုင်းတွေပေး (သူကအင်တင်တင်ဒါတောင်) ဒီဘက်က လိုချင်လောက်တဲ့အချက်နဲ့လည်းသူက ကိုက်ညီတယ်လို့ထင်လို့ အတင်းလျှောက်ခိုင်းလိုက်တာ အောင်ပါတယ်။ (ကျွန်မ တအားဝမ်းသာမိလို့ပါ။ ကိုယ်တိုင်သူများပေးတဲ့စကောလာစားနေရတော့ သူများတွေကိုလည်း ကိုယ့်လိုခံစားစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ တိုက်တွန်းမိလိုက်တာပါ) လိုအပ်တဲ့အင်ဖော်မေး၇ှင်းတွေ ကျွန်မ ၃ ယောက်လောက်ကို ၂၀၁၀ တည်းက လှမ်းပြီးပို့ပေးပါတယ်။
တစ်ယောက်မှတုတ်တုတ်မလှုပ်ဘူး ။ ဒီနှစ်ထပ်ပြီး အဲ့ထဲက နောက်တစ်ယောက်ကို ဒီဘက်ကနေ ဆူဆူဆဲဆဲ (ခင်လွန်းလို့ပါ) လျှောက်ပါဘာညာဆိုမှ လျှောက်တော်မူတယ်။ အိုင်တီ လျှောက်တဲ့သူကတော့ ဒီနှစ် အခွင့်အရေးမရသွားရှာပါဘူး။
ADB စကောလာကို လျှောက်မယ်ဆိုရင် ၂ လပိုင်းလောက်မှာလိုအပ်တာတွေ ကျောင်းကို လှမ်းပို့ရပါတယ်။
၃ လပိုင်းလောက်ဆိုရင် လျှောက်တာကို လက်ခံတယ်မခံဘူးဆိုတာကို ကျောင်းကပြန်အကြောင်းကြားပါတယ်။
ကျောင်းက လက်ခံတယ်ဆိုတာနဲ့ ကျောင်းနဲ့အင်တာဗျူးပါတယ်။ နောက်ကျောင်းနဲ့ ဗျူးတဲ့အခါ မေလ်းနဲ့ လှမ်းပြီး ပေ၇ာ်ဖက်ဆာနှစ်ယောက်က အမေးအဖြေ တွေ၊ ပုဒ်ဆာလိုမျိုးနဲ့ ကိုယ်တင်မယ့် စာတမ်းအကြောင်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်ထားလည်းဆိုတာကို မေးတာတွေပါ။
ကျွန်မလည်းဒီတစ်ခေါက်မှ ဆရာတွေ လှမ်းမေးတာမြင်ဖူးတာ. (ကျွန်မတို့စကောလာနဲ့ နည်းနည်းကွာတယ်) တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ခက်လာသလိုလည်းမြင်ရတယ်။ အဲ့လိုဖြေရတဲ့အခါမှ အီးမေလ်းပြန်ဖို့ကို အချိန်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ နောက် ဆရာက ဖုန်းဆက်ပြီး အင်္ဂလ်ိပ်လိုမေးဖြေတွေလည်းလုပ်တာတွေ ရှိပါတယ်။
ဖြေပြီးလို့ တစ်လလောက်အကြာမှာတော့ ADB စကောလာအတွက်ရတယ်မရဖူးဆိုတာ လှမ်းအကြောင်းကြားပါတယ်။
၂။အိမ်ထောင်စုစာရင်း နိုတြီ .နဲ့ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ကော်ပီ
၃။မှတ်ပုံတင် ကော်ပီ နဲ့ နိုတြီမူရင်း
၄။ ဘွဲ့လက်မှတ်ကော်ပီ နဲ့ နိုတြီ မူရင်း
၄။နောက်ဆုံးထိတတ်ခဲ့တဲ့ ဘွဲ့ လက်မှတ် (တစ်ချို့မာစတာ ပြီးထားတဲ့သူတွေအတွက်ပါ)
၆။လုပ်ငန်းခွင်ကနေ recommendation letter လုပ်ငန်းခွင်အတွေကြုံ ၂ နှစ် အနည်းဆုံးရှိရပါမယ်။
၇။ ကိုယ်ဘာကြောင့် လျှောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်..
၈၊၊နောက် ကိုယ်စာသင်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် (နိုင်ငံကိုပြန်မှာလား ဆိုတာပါ ရေးကြပါတယ်) ။
အင်္ဂလိပ်စာ IELTS သို့မဟုတ် TOFEL ဖြေထားတဲ့ရမှတ်
၉။ ကိုယ့်ရဲ့ သီးစစ် ပရိုပိုဆယ်။. အနည်းဆုံး A4 8 ရွက်လောက်ရေးတာတွေ့ပါတယ်။
ဒါတွေကို အကုန်လုံး Post mail နဲ့ပို့ရတာပါ။
သတ်မှတ်ချက်က TOFEL ဆိုရင် ၅၅၀ အနည်းဆုံးပါ။ လက်၇ှိအောင်လာကြတဲ့သူတွေဟာ ၆၅၀ အထက်မှာရှိကြပါတယ်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခု မှာ မာစတာပြီးထားပြီးသူတွေ လျှောက်လို့မရပါဘူး။
ယခု စကောလာတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လိုသင်မယ့် course တွေပါ။ နိုတြီ လည်းပဲ အင်္ဂလိပ်လို ပဲလိုအပ်တာပါ။
(ယခုအောင်တယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းလေးက အင်္ဂလိပ်စာမှာအမှတ်က အရမ်းကိုမြင့်သလို ဂျာမန်ဘာသာကိုလည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ သူ လက်၇ှိမှာ နာဂစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဒေသမှာ(NGO) အလုပ်လုပ်နေသူပါ။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အကြောင်းရာကို ပရိုပိုဆယ်အနေနဲ့ရေးသွားပါတယ်။)
ပရိုပိုဆယ်. (ကိုယ့် ဘာအကြောင်းရာကို သီးစစ်လုပ်မှာလည်းဆိုတာ အတိအကျရေးရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းရောက်ပြီးမှ ဒေတာအနေထားပေါ်မူတည်ပြီး သီးစစ်ခေါင်းစဉ်ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။
ကိုယ်ရေးပီးတင်လိုက်တဲ့ သီးစစ် ခေါင်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်အပေါ်ဗျူးမယ့် ဆရာ လက်ခံမယ့်ဆရာ ကျောင်းက သတ်မှတ်တယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဗျူးတဲ့ဆရာမတူကြလို့ပါ။
လိပ်မူတဲ့အခါ ကျောင်းကို ပဲ လိပ်မူကြတာပါ။ ဘယ်ဆရာရယ်လို့ လိပ်မူတာမဟုတ်ဘူးလေ။
အသက်ကန့်သတ်ချက်။ မြန်မာပြည်အတွက်ကို ၃၅ ထိ pass ပေးတဲ့ပုံရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ၂၂ နှစ်ပြည့်ပြီး ၂၈ ထက်မကျော်ရလို့ လည်းသိရပါတယ်။ ၃၅ နဲ့အောင်လာတဲ့သူတွေရှိသလို( မြန်မာ) အသက်ငယ်ပေမယ့် လုပ်ငန်း အတွေ့ကြုံ ၂ နှစ်မရှိလို့ ကျတဲ့သူ (နိုင်ငံခြားသား) တွေလည်းရှိပါတယ်။
လတ်တစ်လော မွန်ဘူးရှောစကောလာနဲ့ ရောက်နေသူက လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ မရှိလို့ ADB ဖြေလို့ မရခဲ့ဘူးလို့ ပြန်၇ှင်းပြဖူးလို့ပါ။
ဘာလိုအကြောင်းရာတွေ ရေးကြသလည်း ။
သူများတွေရဲ့သီးစစ်ခေါင်းစဉ်တွေကို ဘလော့မှာ ပြန်ပြီးဒီအတိုင်းတင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်လို့
Monetary Policy and …………………………………
Financial development and…………………………………….
Fiscal policy and ………………….: The case study on ………………………….
Regional Development of………………….sector and ………………………
Micro credit firm and constraints……………….
Deforestation and regional economy…………………………….
Women Empowerment and ……………………………….
Migrant Labour issue and……………………………
Trade and ………………
Safety net နှင့်…………………………………..
ကျွန်မဆိုရင် (………….) role on မဟာမဲခေါင်ဒေသနှင့် The case study on (…….) ပါ။
အထက်မှာတင်ပြလိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေဟာ သာမန်ခေါင်းစဉ်တွေပါ။ ကွန့်နိုင်တဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ပေပါတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေလာကြသလည်း ဆိုရင်တော့ ဘဏ်တွေမှာ လုပ်နေကြသူတွေ များပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Theorically နဲ့တင်မဟုတ်ပဲ စာတမ်းတွေကို empirical analysis လုပ်ရပါတယ်။
အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အခါမှလည်း ဆရာအများစုကတော့ micro level ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားတွေကတော့ macro level ကိုပဲ အသုံးများကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်က တစ်ချို့သောတင်လာတဲ့ ပေပါတွေ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာမြန်မာပြည်ကို ပြန်ပြီး contribute လုပ်နိုင်မလုပ်နိုင်ဆိုတာတွေလည်းဆရာတွေက စဉ်းစားသလို ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ပေပါကို တာဝန်ယူပြီး လုပ်ပေးမယ့် ပရော်ဖက်ဆာ မရှိဘူး ။ သို့မဟုတ် သူများလုပ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ ………………………………….
သူနဲ့ကြမှ တိုက်တိုက်ဆိုင် ဆိုင် .. သူနဲ့ကြမှ…. တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် လို့ ဆိုရယုံပဲ ရှိပါတော့တယ်။
နောက်ပို့စ်မှာလျှောက်လို့ရတဲ့ ကျောင်းလင့်ခ်တွေ၊ အသုံးစရိတ်တို့ ၊
ကျောင်းပြီးရင်ဆိုတာလေးတွေ ဆက်ပြီးရေးပါ့မယ်။ ဒီပို့်စ်ကို မှတ်မိသလောက်အကြောင်းရာများနဲ့ ရေးလိုက်ပါတယ်။
(ပြန်ပြင်ဆင်ချက်)စကောလာလျှောက်နည်းကို အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မအသုံးနှုန်းမှာ အပြင်လူ တို့ အပြင်ကနေလို့ သုံးထားမိပါတယ်။ အပြင်ကနေဆိုတာ အစိုးရ၀န်ထမ်းမဟုတ်သူ ကျွန်မတို့လို့ သာမန်ရိုးရိုးအပြင်ကလူကို ဆိုလိုတာပါ။
အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုမှတော့ ကျွန်မမရေးလည်း နှစ်စဉ်ခေါ်တဲ့စကောလာကို သိကြတာပဲလေ။
ခုကျွန်မ ရေးတဲ့ပိုစ့်က ကျွန်မတို့လို့ သာမန်ရိုးရိုး အပြင်ကလူတွေက စကောလာလျှောက်နည်းကို သိတဲ့သူနည်းတဲ့အတွက် ပြန်ဝေမျှလိုက်ခြင်းပါပဲ။
Posted by ကြည်ကြည် at 12:14 AM 12 comments:
ဒီပိုစ့်ကို ဂျပန်မှာကျောင်းတတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများ အတွက် ရည်ရွယ်ပီး
မိမိကိုယ်တိုင်၊ တူမလေး၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့မြန်မာအသိုင်းဝိုင်းရဲ့ အနေထားကို အခြေခံပြီးမြင်သလောက်ရေးတာပါ။
ကျွန်မ ဒီပို့စ်ကို self finance student နဲ့ fully scholar ဆိုပြီး ၂ ပိုင်းခွဲပါမယ်။ fully scholar မှာ graduate နဲ့ postgrad ကို အဓိကထားပြီး ရေးပါ့မယ်။
ဒီပို့စ်မှာတော့ self finance , undergrad ကို ရှင်းပြပါ့မယ်။
တက္ကသိုလ်စပြီးတတ်တော့မယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ရန်ကုန်မှာစုံစမ်းကြတော့မှာပါ။
အများစုကတော့ ဂျပန်မှာကျောင်းတက်မယ်ဆိုရင် ၁၂ တန်းလိုပါတယ်။ ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း တစ်ချို့ ဂျပန်စာကျောင်းအရင်တတ်ပြီး။
တစ်ချို့ တစ်ခါတည်းတက္ကသိုလ်ကို တန်းပြီးတက်နေတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ဂျပန်စာအတန်းတက်ပြီးမှ တက္ကသိုလ်လျှောက်တဲ့ အကြောင်းရာကိုရေးပါမယ်။ ကျွန်မက ကောလိပ်မတက်ခင် ဂျပန်စာအတန်းတစ်နှစ်( Language Institute) အရင်တက်ခဲ့ရပါတယ်။
Language institute ထဲက Monbusho fully scholar ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် self finance ကျောင်းသားတွေ ရန်ကုန်က သင်တန်းတွေမှာ မေးစမ်းပုံတွေ မသိပါဘူး။ မရေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီရောက်ပြီးမှ ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကိုပဲရေးပါ့မယ်။
ကျွန်မတို့ ခေတ်နဲ့တော့ကွာကောင်းကွာနိုင်ပေမယ့် လက်ရှိက ပိုလိုတောင်လှမ်းလို့လွယ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာဂျပန်စာကျောင်းတွေများသလို ဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျောင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုက ဒီကနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတာ
သိပ်မတွေ့ရပါဘူး။ မြန်မာပြည်က ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းတွေမှာ စာသင်လာခဲ့ပေမယ့် ဂျပန်လာတဲ့အခါမှာလည်း သူတို့ နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ JapaneseLanguage School ကို အရင်တက်ခိုင်းပါတယ်။ ၁ နှစ်သို့မဟုတ် ၂ နှစ် ပြီးတော့မှ နောက်ထပ်ကောလိပ် သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်ကို တက်လို့ရပါမယ်။ အဲ့ဒီ့မှာ ဒီက Language School ကနေ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ကောလိပ် သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်ကို ၀င်ခွင့်ဖြေကြပါတယ်။ သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကျောင်းတွေရဲ့ ၀င်ခွင့်က အောင်ကိုအောင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ဖောက်ထွက်ပြီး တခြားတက္ကသိုလ်ကို လှမ်းရဲတဲ့ကျောင်းသားလည်းအားကျဖွယ်ရာရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပဲ ဆက်တက်မယ့် ကျောင်းသားအတွက်ကတော့ ကျောင်းသားရဲ့ Grantor လိုတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ မပူရပါဘူး။ သူတို့ကျောင်းတွေကပဲတာဝန်ယူပေးသွားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဘာတွေဖြစ်လာသလည်းဆိုရင်... ဥပမာ ..
ရန်ကုန်မှာလည်း ရှိတဲ့ Language School (kyikyi school ပဲထားပါတော့ )။
(၄င်းဂျပန်စာကျောင်းဆိုရာတွင် ခုရှိမရှိတော့မသိရတော့ပါ)။ ၂၀၀၇ မှာအဲ့ဒီ့ကျောင်းကနေလာတဲ့ အသိညီမလေးတွေကျောင်းတတ်ဖို့ ဂျပန်ကိုလာပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ဒီမှာရှိနေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ ကျောင်းကိုလိုက်ပို့မိပါတယ်။ ၄ ထပ်တိုက်တစ်တိုက်ကို ၂ လွှာကို ကျောင်းအနေနဲ့လုပ်ထားပါတယ်။ ပြောရရင် ကျူရှင်သာသာနီးပါးကိုကျောင်းလို့ခေါ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး မြန်မာကျောင်းသား ၂၅ ယောက်နဲ့ တရုတ်ကျောင်းသား ၂၀လောက်နောက်တခြားနိုင်ငံသား ကျောင်းသားနည်းနည်းလောက်နဲ့ ကျောင်းက လူ၁၀၀တောင်မပြည့်ပါဘူး။ ပထမဆုံးမြင်ဖူးခြင်းပါ။
ကျွန်မသိထားခဲ့တဲ့ Language School ဆိုတာက လူ ၇၀၀ နဲ့အထက် ရှိတဲ့ Language School ကြီးပါ။ ကျောင်းရဲ့နာမည်ပေါ်မူတည်ပြီး Language School နာမည်ပေါ်မူတည်ပြီး သွားလို့ရတဲ့ကျောင်း လျှောက်လို့ရတဲ့ကျောင်း တွေကလည်း သိသာပါတယ်။ လျှောက်တာတော့ ကျောင်းတိုင်းလျှောက်လို့ရပါမယ့် ဒါပေမယ့် နာမည်ရှိတဲ့ Status တစ်ခုရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေကိုကြတော့ နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေက နေ ကျောင်းလျှောက်ရန် အမြဲလာပြီးကြော်ငြာပေးပါတယ်။ ဒါက နာမည်ရှိပြီးသား Japanese School မှာတက်ခြင်းရဲ့ advantage ပါ။
နာမည်ရှိပြီးသားကြီးတဲ့ကျောင်းနဲ့ စောနက ရန်ကုန်ကနေချိတ်လာတဲံ့တစ်ချို့သောကျောင်းတွေကြတော့ အပေါ်မှာကျွန်မ ရှင်းပြခဲ့သလိုပါပဲ။ ဆက်တက်ရမယ့် ကောလိပ်အဆင့်က သိပ်နာမည်မရှိဘူးဆိုရင် ...ဘယ်မှာသိသာသွားနိုင်မလည်း ကျောင်းပြီးတဲ့အထိတော့မသိသာပါဘူး ကျောင်းလည်းပြီးရော။ အလုပ်ကလာပါပြီ။ အကယ်၍ကျောင်းပြီးရင် ဂျပန်မှာ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ပြီး ရပ်တည်မယ်ဆိုရင်တော့ နာမည်ကြိး တက္ကသိုလ်ကျောင်းကောင်းကနေထွက်တဲ့အတွက် အလုပ်ရဖို့အခွင့်အရေးနဲ့ အလုပ်လျှောက်လို့ရတဲ့နယ်ပယ် ဟာ ပိုကျယ်ပြန့်ပါတယ်။
ကဲ စရိတ်အနေနဲ့ရော ....
ရန်ကုန်ကနေ ချိတ်ပေးလိုက်တဲ့တစ်ချို့သောကျောင်းတွေဟာ တစ်နှစ်ကိုမှ အလွန်ဆူုံး ၅ ယောက်ကနေ ၂၀ ပေါ့ ။ခေါ်လို့ရတာပါ ။ဒါတောင်လ၀က က လက်မခံရင် လာတက်လို့မရတဲ့ သူကရှိပါသေးတယ်။ လူသာနည်းတာအဲ့ကျောင်းတွေရဲ့ စရိတ်ကတော့မသေးပါဘူး။
နာမည်ကြီး Japanese Institute တွေဟာ တစ်နှစ်စာ သောင်း ၈၀ နီးပါးကနေစပါတယ်။ ရန်ကုန်က ချိတ်လာတဲ့ Language school ကလဲ သောင်း ၆၀ အထက်တော့ရှိပါတယ်။
ကျောင်းကြီးကြီးတွေကတော့ grantor လိုအပ်ပါတယ်။ဒီတော့ အဆက်အစပ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် က ရန်ကုန်ကနေ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက့်မယ့်ကျောင်းကသာလျှင် အဆင်ပြေနေတာတွေ ရှိလို့ ရန်ကုန်က ချိတ်လိုက်တဲ့ကျောင်းမှာပဲ နေရတာနားလည်ပေမယ့်။ Language School ပြီးလို့ တက္ကသိုလ်တက်တော့မယ်ဆိုရင်၊
ဘ၀ကို ဂျပန်မှာ ရေရှည်မြှပ်နှံမယ်ဆိုရင် နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ခုခုကို သာ သတ္တိရှိရှိ
Language School တွေက နေ့တစ်ဝက်ပဲ ကျောင်းတက်ရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ချိန်ပိုရပါတယ်။ language School အကြီးတွေကြတော့ တနေကုန်အတန်း နဲ့ တစ်နှစ်တိတိ ကို စာကိုသေချာလုပ်ရပါတယ်။
ကျောင်းသားကို တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဖြေဖို့လိုအပ်တဲ့စာကိုကျင့်ပေးသလိုမျိုးနဲ့ကို သေချာပြင်ဆင်တာပေးတာပါ။ ဂျပန်စာကို အခြေခံကနေသင်သလို ၊ အခြေခံတက်စရမလိုပဲ advance Japanese သိုမဟုတ် intermediate ဆိုပြီးလည်းအတန်းတွေရှိပါတယ်။
အမှန်တစ်ကယ် သင်ကြားပြီး နာမည်လည်းကြီးတဲ့အတွက် ၀င်ခွင့်ရာသီရောက်ခါနှီးပြီးဆိုရင် နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ၊ အစိုးရကျောင်းတွေကနေ ကျောင်းသားတွေဝင်ခွင့်ဖြေဖို့ စကောလာနဲ့လာမျှားပါတယ်။ တစ်ကျောင်းမရ တစ်ကျောင်းဆိုတဲ့သဘောနဲ့ တစ်ချို့ ၃၊ ၄ ကျောင်းဖြေပါတယ်။ ဖောင်ဖိုးတော့သွင်းရတာပေါ့။ ရလာတဲ့ကျောင်းတွေထဲကမှ တစ်ချို့လည်း စကောလာ ရမယ့် ကျောင်းကိုပဲ တက်ကြသလို တစ်ချို့ နာမည်ကြီးကျောင်းကိုပဲ ရွေးတဲ့ကျောင်းသားလည်းရှိပါတယ်။
နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေဟာ နှစ်စဉ်ကျောင်းသားဦးရေရယ်အင်တာနေရှင်နယ် ကျောင်းသား
စုံလင်စွာလည်းရှိချင်ကြပါတယ်။ သူတို့မှာလည်း စံတစ်ခုက ရှိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဥပမာဆို ရရင် တရုတ်က များတယ်လေ၊ နောက်ကိုရီးယားစသည်ဖြင့်ပေါ့။ မြန်မာ၊ တို့ဘာတို့ကနည်းတော့ မြန်မာကျောင်းသား ၃ ယောက်လက်ခံမယ်လို့ပဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် လျှောက်တာမှ ၂ ယောက်ဆိုမှတော့ ရဖို့က ရာခိုင်နှုန်း များပြီပေါ့။ လျှော့ပေါ့စဉ်းစားပေးကြပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားတွေ
၀င်ခွင့်ခက်သော တက္ကသို်လ်ဆိုတာတွေတောင် ရနိုင်ခြေများပါတယ်။
တက္ကသိုလ် ဆိုတာ ဂျပန်စာလယ်ဗယ် ၁ မှ လျှောက်ရပါတယ်လို့ တစ်ချို့တွေသတ်မှတ်ထားပေမယ့် တစ်ချို့ လယ်ဗယ် ၂ နဲ့တင် လိုချင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကိုအောင်သွားသူတွေရှိပါတယ်။ အစိုးရကျောင်းတွေကတော့ မရဘူးထင်တယ်။ ခုတော့မသိဘူး ကျွန်မတို့တုန်းကတော့မရဘူး ။
အဲ့ဒီ့မှာ ရန်ကုန်ကနေ ချိတ်ထားတဲ့ Language School မှာ ဂျပန်ရောက်ပြီး ၂ နှစ်နီးပါး စာသင်ချိန်ရှိထားပါရက်ဆိုရင်တော့ လျှောက်ရမယ့်တက္ကသိုလ်ကလည်း နည်းနည်းတော့ စီစစ်ပါပြီ။
မြန်မာအများစု ဟာ တိုကျိုအနီးတစ်ဝုိုက်မှာ Language School တတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆက်တက်ရမယ့် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကို တိုကျိုနားပဲ ရွေးပါတော့တယ်။ နယ်ဆင်းပြီး ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကို သွားဖြေသူနည်းပါတယ်။
ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်ပေါခြင်း ။
ရတာနာရှိရာ ရတာနာစုပေါ့လေ။ မြန်မာရှိရာ မြန်မာစုကြတော့ မြန်မာကျောင်းသားတွေဟာ နယ်ဆင်းပြီး နယ်က တက္ကသိုလ်တွေမှာ စကောလာလျှောက်ယူဖို့လည်းသိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး။ ကျောင်းခေါ်ချိန်လည်း မှန်ချင်မှမှန်မယ်။ တစ်ပတ်ကို အလုပ်က ၄ ရက်လောက်လုပ် ပို်က်စံစုမယ်. ရန်ကုန်အိမ်ကိုပြန်ပို့ချင်တယ်ဆို တာကိုသာ အဓိက ထားလိုက်ကြပါတော့တယ်။
နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ် ၀င်ခွင့်ရအောင် စာကိုတစ်နှစ်လောက် ဒုက္ခခံဖို့ တို့မြန်မာကျောင်းသားတွေသိပ်
ခုဆိုတူမလေးက ဂျပန်စာကျောင်းမှာတင် ၂ နှစ်နေမတဲ့။ အလုပ်လုပ်ရင်း အိမ်ကိုလည်း ပို့ရင်း နောက်နှစ်မှ စာလုပ်ပြီးတက္ကသိုလ်လျှောက်မတဲ့။ အံ့ရောပဲ။
တစ်ကယ်က နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ စကောလာ မှာ တစ်ချို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တရုတ်ကို ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း၊ ကိုရီးယားကို ဘယ်နှစ်ယောက်. ဘာကိုဘယ်နှစ်ယောက်ပေါ့လေ။ မြန်မာတွေက လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကိုလျှောက်လို့ရပါတယ်။ စာရယ် ကျောင်းခေါ်ချိန်နဲ့ ပဲ တွက်ယူတယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာကကျန်ခဲ့တာများပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆို မြန်မာတွေက ကျောင်းထက် ပိုက်ဆံရှာဖို့ပဲ ပိုစိတ်
၂ နှစ်နီးပါး Language School တတ်နေခဲ့တဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် တစ်ချို့သော စာတွေလာတာမဖတ်နို်င်ဘူး။ ကျွန်မဂျပန်လာတဲ့အခါမှ အစ်မရေဖတ်ပြပါအုန်းလုပ်တယ်။ အမရယ် မနက် ရုံးသန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်တယ်။ နေ့လည်ကျောင်းတက်တယ်။ ညဘက် စားသောက်ဆိုင်ဝင်တယ်။ စနေကို ဟိုတယ်ကိုအိပ်ရာသွားခင်းတယ် သမီးဘယ်လိုလုပ် စာလုပ်နိုင်မလည်းတဲ့။ ကဲခုကျောင်းပြီးပြီ။ ကျောင်းသာပြီးသည်။ စာသေချာမတတ်တော့ သူများနဲ့ယှဉ်ပြီးတရားဝင်အလုပ်သွားလျှောက်ဖို့ သတ္တိမရှိတာရယ် ၊တရားဝင်လုပ်ရင် လစာက part time လောက် လည်းမရဘူးဆိုပြီး ကျောင်းပြီးတော့ဗီဇာဝယ်နေတယ်။ ခု အလုပ်ဗီဇာဝယ်တဲ့ကိစ္စတွေက နောက်ပိုင်း ဂျပန်ကလည်း လိုက်လာပြီ ကျပ်လာပြီ။ ရေရှည်ကိုတွက်ကြည့်ဖို့ပါ။
အပေါ်ကနေပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ဂျပန်မှာာအချိန်တော်တော်ကြာ ဘ၀ကိုမြှပ်မယ်ဆိုရင် နယ်ဘက် သို့မဟုတ် ကျွန်မတို့ ကန်ဆိုင်းဘက်က တက္ကသိုလ်တွေကိုလျှောက်ကြပါ။ ကျောင်းလခတွေ များကြီးသွင်းခဲ့ပြီး ကျောင်းပြီး ဗီဇာဝယ်နေပြီး ရရအလုပ်ဝင်လုပ်မယ့်အရာမျိုးတော့ မတွေးကြစေချင်ပါ။
ကျောင်းလခဆိုတာကလည်း ဂျပန်မှာဘယ်ကျောင်းမှ အပြည့်တစ်ခါတည်းမသွင်းကြရပါဘူး။ တော်တော်များများက ခွဲပြီးသွင်းကြတာပါ။ နာမည်ရှိနေတဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမနှစ်မှာ မရရင်တောင် ဒုနှစ်မှာ စကောလာလျှောက်ယူရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျောင်းလခထက် ၃၀ရာခိုင်နှုန်းတို့ ၅၀တို့လျှော့ပေးပါတယ်။နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တွေဟာ အဆက်အသွယ်များတဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းစရိတ်ပေါ့လျှော့ခွင့်တွေအပြင် ထောက်ပံကြေး စကောလာတွေကလည်း တစ်နေရာကနေ တို့တိ တစ်နေရာကနေ တို့တိ နဲ့ ရကြပါတယ်။ ကျောင်းကနေ မိတ်ဆက်ပေးကြတာပါ။
ကျောင်းကနေပဲ လခ လျှော့ပေးတဲ့အပြင် တစ်လ ၅သောင်းတို့ ဘာတို့ရအောင် ရှာပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ များကြီးပါ။
တစ်ချို့ fully scholar ထက်တောင်ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ self finance ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ကလည်းလုပ်လို့ရတယ်လေ။ ကျွန်မတို့ အလုပ်လုပ်ခွင့်မရပါဘူး။
တစ်ချို့ ကျောင်းသူများ တစ်လ ၂၅ သောင်းလောက်အောက်ထစ်ထွက်ကြပါတယ်။ အံ့ရောပါပဲ။
Self finance student ထဲမှာ ကိုရီးယားနဲ့ ထိုင်ဝမ်လောက်သာ တစ်ချို့ပြည့်စုံတာပါ။ မြန်မာအများစုဟာ ရန်ကုန်က မိသားစုက မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။ တစ်ချို့များ ချေးငှားလာရတော့ အတိုးတတ်မှာဆိုးလို့ပါဆိုပြီးဒီကနေနိုင်သလောက်ပြန်ပို့နေရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ၁နှစ် ၂ နှစ်ကို အနှစ်နာခံပါ။ စုဖို့မစဉ်းစားပဲနဲ့ ကျောင်းစာကိုသေချာလုပ် တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းလျှောက်ပါလို့။ ဒုက္ခခံတယ်ဆိုတာ ထမင်းမစားရလောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ သွားချင်တာသွား လိုချင်တာလေး ၀ယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကို ခဏ အောင့်ထားဖို့ပါ။
စကောလာအဆင်ပြေလာတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် မာစတာ ဒေါက်တာဆိုတာဆက်တက်ဖို့ ပိုတောင်လွယ်ပါတယ်။ (စာကို ပြောတာမဟုတ်နော်)
ဒေါက်တာအထိမသွားနဲ့အုန်း မာစတာဆိုရင်ကို ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ဝင်ရင် သောင်း ၂၀ (လက်ရှိကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျွန်မစီနီယာ အိုင်တီသမားရဲ့လစာ) လောက်ကနေစပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုမှာရှည်ကြာရှည်စွာလုပ်ပြီး ၃ နှစ်တစ်ခါ ၃နှစ်တစ်ခါ ဗီဇာသက်တမ်းလည်းတိုးဖူးပြီ။ အခွန်လည်းထမ်းပြီးပြီ ဆိုရင်
PR နဲ့ နိုင်ငံသားလျှောက်ဖို့ က အခွင့်အရေးက ကိုယ့်ဘက်မှာ၇ှိနေပါပြီ။
စကားမစပ် ဒီမှာမာစတာပြီးလို့ post grade တတ်တော့မယ်ဆိုရင် trilingualဆိုရင် ဦးစားပေးပါတယ်။
ဒီတော့ ဂျပန်သွားမှာ အင်္ဂလိပ်စာသိပ်မလိုဘူးလို့ ထင်ထားခဲ့ရင်တော့ မမှန်တဲ့အတွေးပါ။
ဂျပန်စာကို တစ်စိုက်မှတ်မှတ်လုပ်လာတဲ့သူဟာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ အားနည်းပါတယ်။
တက္ကသိုလ်လျှောက်တဲ့အခါ အရှေ့တောင်အာရှကျောင်းသားတွေဟာ တရုတ်၊ ကိုရီးယားတွေ လို ခန်းကြီး မရတာ ကျောင်းတွေက ထည့်စဉ်းစား ပေးပါတယ်။ ကောင်းပြီ တရုတ်၊ကိုရီးယားထက်ဘာသာလည်း ကြည့်ပါတယ်။ လိုအပ်လာတာ အင်္ဂလိပ်စာပါ။ ဒီရောက်မှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်ရင် ပိုက်ဆံပိုကုန်မှာပေါ့။
ခုကျွန်မအသိကောင်မလေး Fully scholor ရသွားတဲ့ကောင်မလေး (မာစတာ) (နောက်ပို့စ်တွင်သေချာရေးမည်). ကရန်ကုန်ကနေလာမှာပါ။အင်္ဂလိပ်စာကို တစ်ဖက်ကမ်းခတ်သလို ဂျာမန်ဘာသာ ကိုလည်း ပိုင်နိုင်တဲ့အတွက် ခုသူ့တောင်မလာသေးဘူး သူ့အတွက် part time လေးရထားပြီးပါပြီ။ တစ်ချို့ part time ကို အင်္ဂလိပ်စာပြပေးတာတို့ဘာတို့နဲ့ သက်သာစွာ နေချိန်မှာ ကျွန်မတို့မြန်မာ ကျောင်းသူ၊သားတွေ ပင်ပန်းစွာ စားသောက်ဆိုင်မှာ လုပ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်မတူမကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် တိုကျိုမှ တိုကျို ဆိုတာ ကိုမရွေးပါနဲ့။
ကျောင်းနာမည်ကိုလည်းကြည့်ပါ။ ကျောင်းတွေဟာ မြန်မာတွေကို welcome ပါ။ အခု မြန်မာသတင်းတစ်ခုမှာဖတ်လိုက်ရတာ APUတက္ကသိုလ် ကျောင်းမှမြန်မာများအားစိစစ်လို့ရေးထားပါတယ်။
တဆင့်စကားနဲ့ကြားရတာက ကျောင်းသားတွေကကျောင်းလည်းရောက်ရော တိုကျိုဘက်ကို ထွက်ပြေးကြတယ်ပြောပါတယ်။ အလုပ်လုပ်ချင်ကြတာကိုး။ နောက်ရဲကမိတယ်ကြားတယ် ။ ရဲကကျောင်းကိုဖုန်းဆက်တော့ ကျောင်းက Deport သာလုပ်လိုက်လို့အဖြေပေးတယ်လို့ကြားတယ်။
APU ဟာ ကျူးရှုးမှာရှိပါတယ်။
ဒီတော့ ချက်ချင်းကြီး ဂျပန်သွားကျောင်းတတ်မယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်မလွယ်ကူပါဘူး ။ ပြင်ဆင်ဆဲကာလ မလာခင်မှာ ဂျပန်စာကိုတစ်နှစ်လောက်ရန်ကုန်မှာသေချာလုပ်လာပါ။ဒီရောက်တော့ မပန်းဖုးပေါ့။ လာပါ ကျောင်းသားဘ၀ ဘာမဆိုလုပ်နိုင်မယ်(သမာအာဇီဝ)။ အလုပ်လည်းလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အလုပ်ကတော့ရှိပါတယ်။
တစ်ချို့တွေအလုပ်မရလို့ပြန်သွားရတာတွေရှိပါတယ်။ စကားမရပဲနဲ့တော့အလုပ်က မလွယ်ဖူးလေ။ နောက် အိမ်ကတူမလေးဆို လူလေးကသေးတော့စစချင်း အလုပ်သူ့ကိုမပေးချင်ကြဘူး လုပ်နိုင်မယ်မထင်ဖူးဆိုပြီး။ ခုတော့လည်း နောက်နှစ်မှ တက္ကသိုလ်လျှောက်မယ်သမီးရှာလိုက်အုန်းမယ်ဆိုလား ပဲ။
ဒါကြောင့် Language School ကို တိုကျိုဘက်မှာတတ်ရမယ်ဆိုရင်တောင် တက္ကသိုလ်ကိုတော့
NARA, OSAKA, KYOTO, KOBE, MIE တစ်ဝိုက်ကကျောင်းတွေကိုလည်းရှာကြပါ။
အစိုးရတက္ကသိုလ်တွေဟာ ၀င်ခွင့်လည်းခက်ပေမယ့် ဈေးလည်းနည်းပါတယ်။ဒါပေမယ့် လျှောက်ကြည့်ကြပါ။
ကျောင်းဝင်ခွင့်မှာ ဂျပန်စာအပြင် အင်္ဂလိပ်စာအမှတ်လည်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင် တခြားသင်္ချာတို့ဘာတို့ညာတို့ သိပ်မဖြေနိုင်ရင်တောင် စဉ်းစားပေးတတ်ကြပါတယ်လို့ ထပ်လောင်းရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
တခါတစ်ခါလည်း ဂျပန်ကျောင်းသားတွေကို တအားအားကျပါတယ်။ မနာလိုဖြစ်မိပါတယ်။
ကျွန်မတို့ ကျောင်းက အင်တာနေရှင်နယ်စင်တာမှာ Oversea program ဆိုတာကိုစားပွဲတစ်လုံးနဲ့ ချထားပါတယ်။
ကနေဒါ၊ သြဇီ၊ ယူအက်စ် ကို တစ်နှစ်သွားမလား ။ ၆ လပဲလား လာထားအမှန်အကန် အကုန် အဆင်ပြေအောင်တာဝန်ယူစီစဉ်ပေးတယ်။
Exchange program အတွက်ဆို ကျောင်းလခ ပေးစရာမလို နေစရိတ၊်စားစရိတ်ပဲကုန်မယ်ဆိုတာတွေများကြီး။
ညာသွားမှာလည်းမစိုးရ လိမ်သွားမှာလည်းမစိုးရ . သွားလိုက်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ။ အင်္ဂလိပ်စာကောင်းမွန်တဲ့ကျောင်းသားဆိုလို့ကတော့ စိတ်ဝင်စားသွားသာလျှောက်ပဲ။ ဒီမှာ ၆ လလောက် part time လုပ် ပိုက်ဆံစု ပြီး ဟိုမှာ ၆ လ စာသွားလုပ်ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေလည်း မနည်းပါဘူး။
2000 တုန်းက ဂျပန်စာကို တစ်နှစ်ပဲလေ့လာပြီး အင်္ဂလိပ်စာအရမ်းတော်သော မြန်မာမိန်းကလေး TOKYO တက္ကသိုလ်ကို အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာနဲ့ အောင်သွားပါတယ်။ TOKYO ဆိုတာ ဂျပန်ရဲ့ Harvard ပါပဲ။ ဒီမိန်းကလေးဟာလည်းပဲ ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုကလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ချွန်ထွက်သွားနိုင်တဲ့သူကိုတော့ လေးစားစွာ အမြဲမမေ့နိုင်ပါဘူး။
ကျောင်းပို့စ်ကိုရေးဖို့ကို ချီတုံချတုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေလည်းရှိမှာပါ။ လိုအပ်ချက်တွေထောက်ပြသွားတယ်ဆိုရင် ကျွန်မ အချိန်ပေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဘလော့ကို ၀င်ပြင်လိုက် ပြန်ဖတ်လိုက်နဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးဖတ်လို့လွယ်အောင် ပြန်ပြင်ထားပါတယ်။
Posted by ကြည်ကြည် at 9:07 AM 10 comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 4:09 AM 18 comments:
ဒါကတော့ ကိုကိုကာလသားတွေ သိချင်ခဲ့တဲ့ မိုးဟေကိုလိမ်းတဲ့ လိုးရှင်း တံဆိပ်ပါ။ BOOTS တဲ့ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ထဲမှာကို ဆိုင်ရှိပါတယ်။ aroma oil တွေလည်း ဈေးလေးမဆိုးပါ။ ဘန်ကောက်လေဆိပ်ထဲက သန့်ှရှင်းရေးအဖွားကြီးကနေ အဲလိုင်းတွေက လေယဉ်မယ်တွေပါလာဝယ်ကြတာတွေ့ပါတယ်။
ပြည်တော်ပြန်ကြတဲ့အခါ ၀င်ရောက်မွှေနောက်လို့ရအောင်ပါ။ Bodylotion တစ်ဗူးကို (၄၀၀မီလီ ) မြန်မာငွေ ဒေါ်လာ၂၀ ကျော်ရင် ကြည်ကြည်မလိမ်းရက်ပါဘူး။ ခုBootsက၃ထောင် ကျပ်လောက်ကနေစပါတယ်။
မျက်လုံးမိပ်ကပ်ဖျက်ဆေးနဲ့ လိုးရှင်းကတော့အကောင်းဆုံးပါ။ မိပ်ကပ်ကတော့ မတိုက်တွန်းပါ။ အဲ့ထဲကမှ ဒီ bergamot orange နဲ့ olive က ကြည်ကြည့်အကြိုက်ဆုံးပါ။
ဘလောဂါတစ်ယောက်ကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးဖူးပါတယ်။ အဲ့အမလည်းအတော်နှစ်သက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အနံကိုသာသုံးကြည့်ပါ။ ဘေးကလူက ဘာတံဆိပ်လည်း ဘယ်လောက်လည်းမမေးရင် လာသတ်လိုက် ..
အကြိုက်ဆုံးကတော့ အောက်ကပစ္စည်းပါပဲ။ မနှစ်က ၈ လပိုင်းမှာ ပါးပေါ်မှာ
၀က်ခြံပေါက်တာကနေကုတ်လိုက်တာ အမဲရာ ၁၀ ပြားစေ့ခန့်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ၉ လပိုင်း အိမ်က မိသားစုလာလည်တော့ မျက်နှာက အမဲရာကို သိသာလို့ ၀ိုင်းမေးတာရော ဓတ်ပုံတွေထဲမှာလည်း ထင်းနေလို့ Internet ကနေလျှောက်ရှာလိုက်တာ ဒါလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ တစ်ကယ်ကို ညွန်းပါတယ်။ တစ်လကိုမိပ်ကပ်ဖိုးယန်းတစ်သောင်းနီးပါး သုံးကြမယ်ဆိုရင် ဒီတစ်ဆိပ်ကနေထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးကြည့်ပါ။ မိပ်ကပ်ဆိုတာမျိုးက ကုန်ရင် အကုန်စုကုန်တာနော်. မိန်းကလေးချင်းချင်းပဲနားလည်မယ်။ ၃ လစာ ၄ လစာ တစ်ဗူးမျိုး ၄ မျိုးလောက်သာဝယ်လိုက် အဲ့လအတွက်က မိပ်ကပ်ဖိုးက အိမ်လခတဲ့များသွားတာတွေရှိတတ်တာကိုး။ ရက်နဲ့ပြန်တွက်ပေါ့။ ကြည်ကြည်ကတော့ ခုနောက်ပိုင်းကိုယ်၎ မျိုး သုံးတယ်ဆိုရင် ၃ လစာစုစုပေါင်းကို လေးမျိုးကို တစ်လချင်းစီပြန်စားတဲ့အခါ တစ်လကို ၄ မျိုးပေါင်း ယန်း၃ထောင်ကနေ ၄ထောင်ကြားကိုပဲ စဉ်းစားပါတော့တယ်။
ဒီ AMPLEUR ကတော့ sample တစ်ပတ်သုံးလိုက်တာနဲ့ အမာရွတ်က သိသိသာသာပါးသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်ဗူးမှာပြီး သုံးလိုက်တာ တစ်ဝက်နဲ့တင်အရှင်းနီးပါးမရှိတော့ပါ။ ကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကတော့ အိမ်က ညီမကိုပေးခဲ့တာ သူလည်းအတော်ကြိုက်ပါတယ်။ ampleur က skincare တွေလည်းသုံးရတာအတော်ကိုနူးညံ့မှု့ရှိလာတာတော့အမှန်ပါ။
ဗူးလေးသေးတယ် ဈေးကလည်းမိုက်တယ်။ ယန်း၁သောင်း၁ထောင်ပါ။
ခုတော့ကျွန်မပြုံးနိုင်ပြီလေ ။နားကပ်လေးလှဖူးလား ဘာလီက ၀ယ်လာတာ. ဟွန်းဟွန်း
အကယ်၍နေ့စဉ် မျက်တောင်ကော့ဆေးကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် မျက်တောင်လည်းပဲ အားဆေးလိုလာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မနှစ်သက်နေမိတာက DHC ကလုပ်တဲ့ မျက်တောင်အားဆေး သို့မဟုတ် based ပါပဲ။ ကျွန်မတို့လက်သည်းနီ ဆိုးကြတဲ့အခါတိုင်း ဆိုးဆေးမတင်မှီ လက်သည်းအရောင်တွေ မပျက်စီးအောင် based coating ခံသလိုပါပဲ။ လက်သည်းနီ ခြေသည်းနီအမြဲဆိုးတဲ့ ခြေသည်းတွေဟာ
အ၀ါရောင်သန်းနေတတ်တာသတိထားမိမှာပါ။။ ဒီလိုပါပဲ။ အခု မျက်တောင်အားဆေး အဖြစ်သုံးနေတဲ့ အရာလေးကလည်း mascara မတင်ခင်မှာ အောက်ခံဖြင့် သုံးလို့သင့်တော်တဲ့အရာလေးပါ။ တစ်ဗူးကို ၅ လနီးပါးသုံးခံပါတယ်။ ယန်း ၁၆၀၀လားပါပဲ။တစ်လကို ယန်း၃၀၀ခုဈေးနဲ့ဆို ၃၀၀၀ကျပ်လောက်ပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ လတွေတုန်းက ဖတ်မှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ လည်း အမျိုးသမီးတွေ နှစ်သက်တဲ့ ပစ္စည်း ranking ထဲမှာပါလာပါတယ်။
မျက်နှာက ၀က်ခြံ တွေ ပေါက်ပြီးကတည်းက ကောင်းနိုးရာရာတွေ လျှောက်ရှာလိုက်တာ အပေါ်က တံဆိပ်ကို ရေရှည်လည်းသုံးဖို့ နှမျောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀ိတ်လျှော့မယ်လေဆိုပြီး ဈေးအဲ့ဒီထက်သက်သာတာတွေ လိုက်ရှာလိုက်တာ နောက်တစ်မျိုးတွေ့လာပါတယ်။ ဈေးလည်း အတော်ကိုနှစ် သက်ပြီး မြန်မာ အသားအရည် အထူးသဖြင့် sensitive skin အတွက်ကောင်းမွန်ပါတယ်။
စကားမစပ် ဂျပန်မှာ အလှကုန်ပစ္စည်းကို ကောင်တာတွေမှာလည်း ရောင်းသလို ဈေးဆိုင်တွေမှာလည်း အတော်များများတွဲရောင်းပါတယ်။ နာမည်ချင်းတူရင်တောင် ဆေးဆိုင်တွေက သက်သာပြီး ကောင်တာ တွေက များပါတယ်။ ကောင်တာတွေရဲ့ အားသာချက်က ရာသီပေါ်မူတည်ပြီး တင်ရောင်းတဲ့ series တွေပါပဲ။
ရန်ကုန်မှာ kanebo , Kose , Shiseido ဘာကြောင့်သိပ်မပေါက်သလည်းဆို ရာသီဥတုနဲ့လိုက်ဖက်တာမဟုတ်လို့ ပါပဲ။
နောက်ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဆို မကိုက်ကြတော့ သိပ်မပေါက်တာလို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်မလည်း kanebo , Kose , Shiseido နဲ့မတည့်ပါ။ ဆီပါသော အရာများနှင့်မတည့်ပါ။
အခု ဒီ တံဆိပ်ကတော့ အပင်ရဲ့ အခေါက်တွေ အပင်ရဲ့ ပန်းပွင့်တွေနဲ့လုပ်ထားပြီး ၄ မျိုးရှိပါတယ်။ ၀က်ခြံသက်သာစေပြီး ကာကွယ်ပေးတာက အညိုရောင်စီးရီးပါ။ SOKAMOKA
ခုနောက်ဆုံးသုံးနေပါတယ်။ အပေါ်က အညိုရောင်ကို တစ်ခါတစ်လေမှ သုံးပါတော့တယ်။ သူက ပိုပြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ ၁၈၀ မီလီတစ်ဗူးကို ယန်း၁၆၀၀ပဲရှိပါတော့တယ်။ အပေါ်က sample ပါ။
နေ့စဉ်လိမ်းနေရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက် ဈေးကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်။ သာမန်ရောင်းနေတဲ့ kanebo, kose, တို့ထက်များပေမယ် special series တွေထက်တော့သက်သာပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ ပစ္စည်းရှာတဲ့ စံက အရင်ဆုံး ဒီမှာ kuchikomi လို့ခေါ်တဲ့ feedback များများရေးတဲ့ ranking ကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်။ ပြီးရင်ဈေးကို ကြည့်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့လိုက်မယ့် product တော့ဖြစ်ရမယ်ပေါ့။ နောက်Herbal သို့မဟုတ် aqua နဲ့လုပ်ရမယ်။ အသီးနဲ့လုပ်တာတွေသိပ်မကြိုက်လို့ပါ။ မျက်နှာအတွက်ကြတော့။ နောက် အနံမပါတာဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး စံသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အွန်လိုင်း feedback ranking no 1 product ပါပဲ။
ကျွန်မတို့ဘက်က နာမည်ကြီး ကုန်တိုက်တွေမှာလည်းတင်ထားပေမယ့် ဈေးက အတော်ကို reasonable ဖြစ်တာလေးပါ။
Cheek colour မှာတော့ ဂျပန်တံဆိပ်ထက် နိုင်ငံခြားတံဆိပ်တွေက သုံးရတာ စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီးမာမီတွေက ဒီတံဆိပ်ကို ပွဲထိုင်တွေမှာလိမ်းတာတွေ့ဘူးပါတယ်။
ပေးရတာ များတယ်ထင်ပေမယ့် သေချာသပ်ရပ်စွာလိမ်းတတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အတော်ကိုဆွဲဆောင်မှု့ရှိစေတဲ့ ပါးနီပါ။ ပါးပေါ်မှာပြောင်ပြောင်လေးပါ။ မလက်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခါ တင်းတိပ်ဆေး လေးမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။
ကြည်ကြည်လို လှနိုင်ကြပါစေ။ (ဘာရီတာလည်းဟွန်း)
Posted by ကြည်ကြည် at 6:20 AM 22 comments:
စောနက ရင်သားကင်ဆာစစ်ခါနီးကြောက်လိုက်ရတာဆိုတာကို ကျွန်မပို့စ်တင်မိပါတယ်။ ခုပဲ ပြန်ဖျက်လိုက်တယ်။ ဘာမှ မဟုတ်ပဲ အားလုံးစိတ်ပူမှာဆိုးလို့။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်မ ပျော်စရာလေးတွေပဲ ရေးချင်တယ်။ ကဲ လာလေ့ရော့ဟယ်။
အင်တာနေရှင်နယ်အဆောင်မှာနေရတယ်ရှင့်။ ဂျပန်စာလယ်ဗယ်တန်းအလိုက် ပြန်လေ့လာဖို့ကို နောက်နှစ်အပတ်ဆိုရင် ယခုနေရာကနေ ကျူရှူးကျွန်းကိုသွားရမယ်ပေါ့လေ။ ရန်ကုန်မှာ လယ်ဗယ်ကိုဖြည့်တော့ လယ်ဗယ် ၁ နှင့် ၂ ကတိုကျို၊ ၃ ဆိုအိုဆာကာ ပေါ့လေ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မက လယ်ဗယ် ၁ လို့ဖြည့်ရင် ငါစာလုပ်ရလိမ့်မယ်။ ၂ လောက်နဲ့ပဲ ဖြည့်ပြီး ၂ လလောက်တော့ နှပ်မယ်။ တိုကျိုမှာလည်း နေချင်တာကိုး။ နေ့တိုင်းအပြင်ထွက်မယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပေါ့။ လာခါနီးလည်းကြရော လယ်ဗယ် ၂ က ယခုနှစ်မှစပြီး ကျူးရှုးကျွှန်းကို သွားရမယ်တဲ့ ။ တိုကျိုသွားချင်တဲ့သူ ခုတော့အိုဆာကာထက် ပိုပြီးတောကျတဲ့ နေရာသွားရတော့မယ်ဆိုပြီးလူက ဟာ ...ကနဲပါပဲ။
န်ိင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေစုံပြီး meeting လုပ်တိုင်း သူတို့က ဦးဆောင်ချင်တယ်။ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ထပြောတယ်။ ငြင်းတယ် ။ ကောင်းပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုလက်ခံတယ်။ ပွဲတစ်ခုခု ဘယ်သူများလိုက်မလည်း။ ၃ ယောက်ပဲရပါမယ်ဆိုရင် သူ့နိုင်ငံက ၃ ယောက်စလုံး လက်ညှိုးထောင်တယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကို ဘယ်သူမှ မကြည့်ဘူး ။ ကိစ္စ မရှိ။တို့မြန်မာများစည်းလုံးသည်။သွားချင်တဲ့နေရာ အုပ်စုလိုက် လစ်ကြတာပါပဲ။
သူ့ကို သတိထားမိခဲ့တယ် အသားဖြူဖြူ ။ မျက်နှာကတော့ ဒီလောက်မလှ။ ကိုယ်လုံး အနေထားလည်း ပိန်ပိန်ထဲကမဟုတ် ၀၀ထဲကတော့မဟုတ်။ သူက ဂျပန်စာကို နာဂိုယာတွေ လေ့လာထားသည်တဲ့။ တစ်နှစ် တဲ့။coordinatorပြောပြထား၍ထင်သည်။ သွားကြမယ့်သူ ၃ ယောက်မှာ မြန်မာ၂ ယောက် သူတစ်ယောက်ပေါ့ဟု သူကလည်းသိထားသည်ထင်သည်။ သူနဲ့အတူတူသင်မည့် သူ ကျွန်မဆိုတာပါ။ တစ်ခွန်းမှ သိပ်မပြောသူ ကျွန်မကိုလည်း ဂျပန်စာလယ်ဗယ် ဘယ်လောက်ရှိသည်ဆိုတာ အရမ်းသိချင်နေပုံ။
ဒီလိုနဲ့ တနေ့ ဓတ်လှေကားထဲမှာ စမေးလာသည်။ ကျွန်မကလည်းသူတအားကို ဂျပန်စာရထားသည်လို့ သူ့အသိုင်းဝိုင်း က ပြောပြထားလို့ အမှန်ပြောရရင် အဖော်ရပြီလို့တောင်တွေးထားတာ။ လက်ရှိမှ ကျွန်မက စာဖြင့်အဆက်ပြတ်နေသူ။
နှုတ်ဆက်စကားဖြင့်တောင် စကားကိုမစပဲ တွေ့တွေ့ချင်းမေးလာသည်က
နင်ဘယ်လောက် ဂျပန်စာတတ်သလည်းတဲ့။ ကဲ... မေးလာတဲ့ပုံကို ကြည့်လိုက်ကတည်းက သူ့လယ်ဗယ်ခန့်မှန်းလို့ ရသွားသည်။ နည်းနည်းပါးပါးပါ လို့ဖြေလိုက်သည်။ သူက ဆက်၍
ခန်းကြီးရော ဘယ်နှစ်လုံးရလည်း တဲ့။ ကျွန်မက စလိုက်မိသည်။ ၃ လုံးလို့ ichi . ni san ပေါ့ တစ် ဆိုရင်တုတ် တစ်ချောင်း၊ နှစ်ဆိုရင် တုတ် နှစ် ချောင်း ၊ သုံး ဆိုရင် သုံး ချောင်းပဲ ဆွဲရတာလေ။ သူနည်းနည်းစိတ်ဆိုးသွားသည့်ပုံ ။သူက အထင်သေးနေတာကိုးလို့ ။ ဒီတော့လည်း ကိုယ်က လျှိုရတာပေါ့ ဟတ်ဟတ်။
နောက်မတွေ့မိ ။ ဒီလိုနဲ့စာသင်မည့်နေရာသို့ ရောက်သွားသည်။ စစချင်းဆရာမက အရည်အချင်းစစ်လေးလုပ်လိုက်ချင်သည်တဲ့။ ဒီ ၃ ယောက်တည်းကိုများ ဆရာမကလည်းပေါ့။ သူက ကျွန်မ နောက်ဆုံး ဘယ်အချိန်ထိ စာမေးပွဲ ဖြေဖူးလည်းထပ်မေးလာသည်။ ကျွန်မလည်း ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာပြီလို့ပဲ အေးအေးဆေးဆေးဖြေရော ..
မနက်စစ် ညနေ အဖြေ ပြောမည်ပေါ့ ။ဆရာမက အမှတ်တော့မပြော။ စာစစ်ပြီးတော့ ဆရာမက ခေါ်တွေ့သည်။ ကျွန်မကို ဒီမှာဆက်သင်မလား။ တိုကျိုရွှေ့တာများကောင်းမလား။ coordinator ကိုပြန်မေးမည်ပေါ့။ ကျွန်မကတော့ ဒီမှာပဲ နေပါ့မယ်။ တိုကျိုလည်းမရွှေ့နိုင်တော့ပါလို့။ တခြားသောသူငယ်ချင်းများ(မြန်မာ)များကတော့စိတ်ဝင်စားနေကြသည်။ ကျွန်မဗရုတ်ကျထားတာသိကြသလို နေရာတကာစွာကျယ်စွာကျယ် လုပ်နေသည့်သူ့ကို သထိထားမိနေကြတာရော ။ ကျွန်မ ကိုယ်ရေ မသွေးသေးဘူးနော်။်ကောင်းခန်း က မရောက်သေးဖူး ဆက်ဖတ်အုံး.
ဒီလိုနဲ့ အဖြေကို သူက ဆရာမကိုမေးတော့သည်။ ၁၀၀မှာသူက ၄၆ မှတ် တခြားမြန်မာကျောင်းသူက ၇၀ကျော် ကျွန်မက ၉၆ အဲ့ဒီ့မှာသူ မျက်နှာပျက်ပြီး ကျွန်မဟာ သူ့အတွက် မျက်မှန်းကျိုးစရာ ဖြစ်သွားတော့သည်ပါပဲ။
သူဟာ အီကိုဌာန က ဆရာမတဲ့ အသက်ကတော့ ၂၈ ။ ငယ်ရွယ်သူမို့ ကျွန်မခွင့်လွှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရီစရာလေးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။
သူက မြန်မာကို မသိဘူးရှင့်။ သူတို့ ဟာလည်း ကွန်မြုနစ်ကနေ ပြောင်းလာတယ်။ ကျွန်မတို့ကလည်းဆိုရှယ်လစ်က ပြောင်းလာတယ်။ သူတို့ဟာ တိုကင်နဲ့အစားအသောက်ကိုတန်းစီ ယူပြီး
အစားကိုစားခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာကိုလည်း အဲ့လိုပဲ သူထင်နေခဲ့ပုံ။ ယခုအချိန်မှာ ဗီယက်နမ်ရဲ့တိုးတတ်ပုံကို သူကပြောသလို မြန်မာသတင်းဟိုဖတ်ဒီဖတ်လောက်နဲ့ သူဟာ မြန်မာကို အထင်သေးတော့တာပါပဲ။ ဆရာမက မြန်မာပြည်ဟာ ဘာမှ မရှိတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်။ စားရေရိက္ခာ ကြွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံလို့ရှင်းပေမယ့်သူက သူတို့နိုင်ငံဟာဆင်းရဲခဲ့တယ်။ ခု သူတို့နိုင်ငံမှာကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ
မ၇ှိတာတွေရှိနေပြီဆိုတော့ ။ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ဟာ ဆင်းရဲမယ်ပဲ... ပေါ့ ။
တနေ့ကျွန်မသူ့ကို ခွင့်လွတ်လိုက်မိတာက ။ သူဟာ ငယ်ငယ်က ၅ နှစ်သမီးမှာ ငှက်ပျော်သီးနဲ့ပဲ ထမင်းစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ ကျွန်မ နားလည်ပေးလိုက်နိုင်တယ်။ တခြားသော ငြှိကြတဲ့အကြောင်းရာတွေကတော့ များကြီးပါပဲ ။ သူက ရတာနာဆိုတာတောင် သေချာနားလည်ပုံမရပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရတာနာတွေ ရှိတယ်ပြောတော့ ကျောက်စိမ်းလောက်၊ ပုလဲလောက်သာသိသူ။ မြန်မာပြည်မှာများကြီးလို့ပြောရင် ယုံတာမဟုတ် ။ ဒီကလေးမနဲ့တော့ ခက်ပါတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ်။
ရီစရာကို အဓိက ထားပြောရရင် သူက ကျွန်မကို ဗီယက်နမ်မှာဆို ယေကျာ်းရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။
ဟယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ အင်းတဲ့ အသားကလည်းမဲတယ်တဲ့။ လူကလည်းဝတယ်တဲ့။ ယေကျာ်းဘယ်လိုရသလည်းတဲ့။ သူက အသားအရည်က ၀င်းနေတာကိုး ။ပိန်ဖို့လည်းအမြဲ ကျိူးစားနေပုံ။
ဗီယက်နမ်ယေကျာ်းတွေက မိန်းမဆိုလှမှတဲ့။ ဒါနဲ့ ကျွန်မကလည်းမနေနိုင်။
ဟင်သူတို့ကြတော့ရုပ်ဆိုးပြီးတော့လို့ ဖြေလိုက်တော့ သူက အောင်မယ် ငါ့ယေက်ျားက ချောချောလေး တဲ့။
ဓတ်ပုံပြလာပါတယ်။ သေချာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်တော့ ကျွန်မမြင်ဘူးသမျှ ဗီယက်နမ် ထဲမှာတော့အတော်ကို ပြေပြစ်ပြီးချောတယ်။
သူ့ယေကျာ်းက ပြည့်လည်းပြည့်စုံတဲ့ပုံ။သူက ဘယ်လိုရအောင် ယူရတယ်ဆိုတာပါပြောထားတာ။ မနော်ဖော်ရဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးကတည်းက ဒါကို ရေးချင်နေတာ။
ဒါနဲ့သူက နင်တို့ မြန်မာယေကျာ်းတွေလည်းမချောပါဘူးတဲ့။ အခုကျွန်မတို့ နဲ့က
စိုက်ပျိုးရေးက ဆရာလေးတစ်ယောက်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ထဲမှာ သူကလည်းအတော်လေးမဲရှာပါတယ်။
ဒါနဲ့ကျွန်မက ဟယ်သူ့ကိုတော့ မကြည့်ပါနဲ့ဟယ်။ ငါတို့မြန်မာအမျိုးသားတွေက မိန်းကလေးကို လှတာထက်၊ မရှပ်မပွေ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ သူကို ပိုကြိုက်ကြပါတယ်လို့ဖြေရော။
သူက ထပ်ပြီးကျွန်မကို နင်က ကံကောင်းပါတယ်။ တစ်ကယ်ပြောတာ ငါတို့နိုင်ငံမှာဆို လုံးဝ ယေကျာ်းရမှာမဟုတ်ဘူးပဲ ထပ်ပြောလာတော့ ကြည်ကြည်လည်းဝမ်းနည်းလာပါတယ်။ အေးဟယ် ငါမြန်မာဖြစ်ရတာ ကံကောင်းတာပေါ့။ ငါ့ကို ယူမယ့်လူလည်းရှိတယ။် ခလေးတောင်မွေးပြီးပြီဟ လို့ပဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီညက အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကိုကိုရေ ကျေးဇူးနော်လို့ဆိုတော့ အိမ်က လူက ဟ ဘာဖြစ်တာလည်းတဲ။့ ကျွန်မကို ယူလို့လေ လို့ပဲ ကျွန်မ ဖြေမိလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ဇတ်လမ်းက မပြီးဘူးရှင့်။ နောက်နေ့သူက ကျွန်မ အမျိုးသားပုံကြည့်ချင်တယ်တဲ့။ ဟာ ခက်ပြီ ဒီတစ်ခါတော့ ငါနိုင်ချင်တယ် ။ ကဲ..ဆိုပြီး တခြားသူငယ်ချင်းတွေ ဆီက အကြံဝိုင်းတောင်းတာပေါ့ ။
သူ့ယေကျာ်းပုံ အရင်ကြည့် ။
မချောရင် ကိုယ့် ချစ်ချစ်ပုံပဲပြ။
ချောရင် နောက်တစ်ပုံပြ ကိုယ့်ချစ်ချစ်ပုံ မထုတ်ပြနဲ့တဲ့ ။ ...ကဲ အဲံဒီ့နောက်တစ်ပုံရဖို့ကို တညလုံး ဟိန်းဝေယံ သိပ်မချောတဲ့ပုံ ယူသွားရင်ကောင်းမလား။ လွင်မိုး ပိန်တုန်းကပုံယူရင်ကောင်းမလားပေါ့။ ကျွန်မတို့ မြန်မာ ၅ ယောက် ခေါင်းချင်းဆိုင်ကြတာပေါ့။
နောက်တစ်နေ့ကြတော့ သူက သူ့ယေကျာ်းပုံကို သေချာပြပါတယ်။ ကျွန်မကလည်းသေချာကြည့်ပြီးတော့ ဟယ်ချောတယ်တော့ပေါ့။ ဒါနဲ့ သူ က ကဲ နင့်အမျိုးသားပုံပြဆိုတော့ ကျွန်မက ပါမလာဘူးပေါ့ ။ အတန်းထဲ ၃ ယောက်ထဲရှိတာ ဆရာမပါသိတယ် ဒီကိစ္စက ။ သူ က ကျွန်မကို စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံ။
ညနေပိုင်းအတန်းလည်းဝင်ရော လိုအပ်လို့ laptop ဖွင့်လိုက်တော့ screen ပေါ်မှာ ကျွန်မက အိမ်က လူနဲ့ခလေးတွေပုံတင်ထားမိတာကိုး ..သူက အတင်းပြေးလာပြီး ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်မ လွင်မိုး ပိန်တုန်းက ပုံမပြလိုက်ရဘူး သူမြင်သွားပြီ။ အိမ်က အညာသားပုံ။
သူက တံတွေးကို မြိုချလိုက်တယ်။ အင်း မဆိုးပါဘူးတဲ့ ။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မသူနဲ့ ၂ လခွဲပဲ တူတူစာသင်ပြီး မိခင်တက္ကသိုလ်ကိုရောက်လာပါတယ်။ ဗီယက်နမ်မဆို လန့်လည်းလန့် အပေါင်းအသင်းလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူး။ အဲ့မှာချစ်စရာကောင်းပြီးမြင်ဖူးသမျှ ဗီယက်နမ်မထဲမှာ အချောဆုံး လို့ဆိုရလောက်အောင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မကို ခင်ခင်မင်မင် အရမ်းပေါင်းပါတယ်။ ကျွန်မကအစပိုင်းက အင်တင်တင်ပါ။ နောက်တော့ ခင်သွားကြတယ်။ သူ့ကို ဒီအကြောင်းပြောပြပြီး ဒါကြောင့် ယူ့ကို စတွေ့ တုန်းက ခင်ဖို့ကို ခပ်ကြောက်ကြောက်ဆိုတော့ အဲ့ကောင်မလေးက ရီလိုက်တာ ပြီးတော့ပြောရှာပါတယ်။ ကျွန်မတွေ့ဖူးလိုက်တဲ့သူက ခပ်ကြောင်ကြောင်လို့မှတ်ပါဟယ်တဲ့။ ခုဗီယက်နမ်မလေးလား ကျွန်မမို့လို့ကျောင်းမလာရင် အိမ်အထိ လိုက်လာတတ်သူ။
တစ်လောက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖုန်းပြောတော့ ဒီအကြောင်းပြန်ပြောပြီး ဒီပို့စ်ကို ရေးချင်လာတယ်။
Posted by ကြည်ကြည် at 7:01 AM 18 comments: